काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि के खुल्ने, के बन्द हुने ? हेर्नुहोस् – Sanchar Patrika
काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि के खुल्ने, के बन्द हुने ? हेर्नुहोस्
August 9, 2020 215
गत शुक्रबार उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु र उद्योग वाणिज्य संघ, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखसहितको बैठकले सट डाउनको निर्णय गरेको हो । बैंठकले आइतबारदेखि लागू हुनेगरी १५ दिनको लागि सटडाउनको निर्णय गरेको हो ।
सटडाउन अवधिभरमा जिल्ला प्रशासन कार्यलयबाट हुने केही विशेष कामबाहेकका सेवा बन्द हुने छ । जिल्ला प्रशासन कार्यलयबाट सार्वजनिक मुद्दा, पास वितरण र शान्ति सुरक्षाको काममात्रै हुने काठमाडौंका प्रजिअ दाहालले जानकारी दिए ।
बैंठकले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डलाई कडाइको साथ पालना गराउने र स्थानीय तहहरुलाई कोरोना महामारीबाट बच्नको लागि तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको दाहालले जानकारी दिए ।
काठमाडौं उपत्यकामा सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकाय तथा बैंकको कर्मचारीहरुमा संक्रमण बढ्दै गएको छ । संक्रमणको दर बढेको र त्यसमा पनि सरकारी कार्यालयहरुमा बढी देखिन थालेपछि यस्तो सरकारले उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन भनेको छ ।
सरकारले जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा नागरिकलाई पनि सुरक्षाको उच्च सतर्कता अपनाउन गरेको निर्देशन र संक्रमितको अवस्थालाई हेरेर यो निर्णय गरिएको दाहालले बताए ।
सरकारी कार्यालयबाट हुने अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द रहने छन्, भने आंशिक कार्यलय खोलेर अत्यावश्यक सेवाहरु दिने निर्णय भएको हो ।
सट डाउन भित्र भिडभाड कम गराउने, स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउने कार्यलयहरुमा कम आवतजावत गर्नका लागि आग्रह गरिएको छ ।
के सञ्चालनमा रहने ?
कुन कुन सेवा बन्द हुने ?
Prevउसिनेको आलुले जस्तोसुकै कालीलाई पनि २० मिनेटमा गोरि बनाउछ ! यो तरिका अपनाउनुहोस – भिडियो हेर्नुहोस।
Nextगोंगबुमा सुटकेशमा शव, जेब्रा झोलामा टाउको भेटियो (अपडेट)
नयाँ कामको सुरुवात हुनुअघि गर्नुहोस् यी काम, सफलताबाट कसैले रोक्न सक्दैन्
नेपाल आइडल सिजन ३ को फाइनल आज : को बन्ला नेपाल आइडल
गुणस्तरहीन जगदम्बा डण्डी बिक्रीमा बन्देज